Shirka Jabuuti ma matalo danaha reer Woqooyiga: QORMO - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Shirka Jabuuti ma matalo danaha reer Woqooyiga: QORMO
Horjooge Muuse Biixi ayaa shirka Jabuuti u kaxaystey 10 nin oo Isaaqa iyo laba nin oo igu sawira oo ka soo jeeda Awdal iyo Sool halka Sanaag ama beesha Warsangeli cidna kaga jirin. Marka bilowgaba waxa kuu muuqda in sheekadu saxneyn marka la fiiriyo magaca Somalilaan ayuu yiri Xuseen Warsame.
Waxaa halkaas kuu muuqda in Farmaajo la kulmayo beel keliya oo hadda wax shaqo ah isku lahayn markay noqoto sheekada goosadka.
Waxa kale oo kuu muuqanaysa in kulanka maanta aanu haba yaraatee ahayn wax Soomaali wadato ee laga leeyahay dano gaara. Danahaas oo hadda uu wato Maraykanka oo ka baqaya inuu ku hungoobo qorshihiisa dalka guud ahaan maadaama ayna jirin awood kale oo kula tartamaysa.
Mar haddii Isaaq badankiisa ka qanceen sheekada goosadka oo hadda looga dhigayo wax lagula gorgortamo Koofurta dalka, waxaad is weydiin kartaa kulan noocana meesha uu gaari karo.
Ururka midnimo markale oo iyagu ahaa SNM-tii hore haddana diidan wax goosad ah ayaa qaba in Soomaaliya faraha laga qaado oo Soomaalida oo hadda waayo aragtey laysku daayo laakiin ma dhacayso waayo danaha laga leeyahay ayaa ka weyn kuwa iyaga dhexdeedu kala leeyihiin, waana sababta loo samaystey federaal ama gobolaysi.
Waana qalad in magaca Somalilaan ee gaalkii Ingiriisku bixiyay haddana uu rabo daaqad uu kula gorgortamo dawlada dhexe, laga dhigo mid Muuse Biixi iyo kooxdiisu matali karaan ayuu qabaa Xuseen Warsame.
Sida xaqiiqda ayaa ah in magaalada Laascaanood ay joogaan Dhulbahante raacsan Somalilaan laakiin gobolka intiisa kale ayna joogin. Sanaag iskaba dhaaf, halka Awdalna boqolkiiba 98% ay marnaba raali ka ahayn goosad, ayadoo aan ognahay in Isaaqa dhexdiisa uu ka soo dhamaadey sheekada goosadka.
Marka shirka Jabuuti ma matali karo danaha reer Woqooyiga, waxase wata danaha shisheeye oo xilligan dareensan inay imaan karto dawlad adag. Cabi Axmed oo Oromo gaal ah wuxuu dareensan yahay in inta uu xukunka hayo Somaliya yeelato dawlad xoogan.